‘माधव नेपाललाई मैले आम माफी दिन्छु भनेको छैन’ – Classic Khabar
July 25, 2021 147
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई माफी दिने म को हुँ? भनि प्रश्न गरेका छन् । उनी आफू ब्यक्तिले नभै आवश्यक भएमा कारवाही गर्ने वा माफी दिने निकाय पार्टी भएको बताएका छन् । पार्टी अनुशासनविपरीत गतिविधि गर्ने जोसुकैलाई पनि कारवाही र माफी आफूले नभइ पार्टीले गर्ने उनको भनाइ रहेको थियो ।
उनले नेपाल र उनको समुहले गरेको कृयाकलाप लोकतन्त्र र राष्र्टियता प्रतिको घात हो भन्ने स्मरण गराउँदै बाटो विराएर गएकाहरुलाई पनि ,पार्टीमा समाहित हुने आग्रह गरे । उनले अहिले राजनीतिक मुख्य विषय भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन महिला नेतालाई पनि सचेत गराए । पार्टीका बारेमा भएका गलत प्रचार र षडयन्त्र विरुद्ध लाग्न निर्देशन दिए ।
Prevमाधव नेपाललाई माफी दिने म को हुँ ? उनका पछि लागेकाहरु मुल पार्टीमा आउनु देश र मुलुक गम्भिर मोडमा पुग्यो
Nextबिहे गरेको १ बर्ष नपुग्दै २१ वर्षीय युवती निर्मला राई जंगलमा….